अदुवा गुलाबी रंग मसालेदार किन छ? लाभ र हानि
अदुवा मूल एक लोकप्रिय बोट छ। यसलाई विभिन्न व्यञ्जन, सस, चिया, पेस्ट्री थपिएका छन् कि मसला लागि उब्जाउ गरिन्छ। मूल राख्ने क्रममा, यो marinated छ। मसालेदार किन छ अदुवा गुलाबी रंग, के लाभ, लेख पढ्नुहोस्।
अदुवा को अदुवा परिवारको बारहमासी herbaceous बोट छ। यो "सेतो जरा" भनिन्छ। यो दक्षिण पूर्व एशिया को देशहरुमा घर हो। दुई हजार वर्ष पहिले युरोप शुरू, अमेरिका मा - को सोह्रौं शताब्दीमा। यसको मातृभूमि, अफ्रीका र अष्ट्रेलिया मा खेती। जंगली, यो बढ्न गर्दैन। यो बक्से मा उद्यान, देश घरहरू वा घरहरू उब्जाउ गरिन्छ।
को बोट बाक्लो, fleshy rhizome छ। यो दुई पङ्क्ति मा मापन-जस्तो पात ढाकिएको छ। यो चिल्लो राउन्ड आकार मूल देखि बढ्न stems। तिनीहरू दुई मीटर धेरै लामो हो,। यो माथिको इशारा pointy पात ढाकिएको छन् stems। फूल सानो पात तराजू resembling, र विभिन्न रंग को फूल ढाकिएको छन् stems। फूलहरू inflorescence स्पिका star name आकार मा संकलित छन्।
अदुवा को रंग मा परिवर्तन को लागि कारण
अदुवा गुलाबी रंग मसालेदार किन छ? यो अदुवा को संरचना मा flavonoids सामग्री कारण हो। तिनीहरूले भनिन्छ anthocyanins छन्। यो पदार्थ marinating जब यो अदुवा गुलाबी रंग दिन्छ जो सिरका, संग प्रतिक्रिया। तर रंग परिवर्तन मूल पकने जवान वा मध्य चरण marinated गर्दा हुन्छ। acuity - त्यतिबेला यसको संरचना कुनै फाइबर र स्वाद छ।
पूर्णतया पाकेको अदुवा कुनै पनि अतिरिक्त staining बिना रंग परिवर्तन गर्छ, यो सेतो रहनेछ। रंग भन्दा अदुवा गुलाबी रंग मसालेदार किन छ? पुरानो मूल नुनीन बनान प्रयोग चुकंदर रस वा अन्य रंजक संग गुलाबी रंग लागि।
मसालेदार मूल को संरचना मा उपयोगी पदार्थ
किन अदुवा गुलाबी रंग मसालेदार छ, माथि लेख। तर यो यस्तो तरिकाले पकाएको अदुवा आफ्नो मूल गुण राख्छ वा पढ्न यहा। यो वैज्ञानिक marinated अदुवा लगभग ताजा मूल मा निहित उपयोगी गुण हराउछ कि सिद्ध छ। उत्पादन उपचार हीट subjected छ किनभने यो छ। यसबाहेक, अदुवा सुधार palatability र सुगन्ध, कम क्यालोरी मसालेदार। यसको संरचना समावेश मा:
भिटामिन ए, बी, सी;
मसालेदार अदुवा समावेश एक सय ग्राम:
प्रति दिन Norma 100 ग्राम
म्याग्नेसियम को दर दोहोरो;
फलाम को एक दैनिक भत्ता;
फस्फोरस र क्याल्सियम को आधा दैनिक आदर्श।
100 G - 51 किलो कैलोरी;
चम्मच -5किलो कैलोरी;
चमचा - 16 किलो कैलोरी।
त्यसैले हामी किन मसालेदार अदुवा गुलाबी रंग र मानव शरीर आफ्नो फाइदाको के हो, भन्नुभयो।
अदुवा सुशी लागि अपरिहार्य मसला हो। सुशी गर्न अदुवा गुलाबी रंग मसालेदार किन छ? किनभने यो पनि बोट सामाग्री को संरचना समावेश गुलाबी मा सिरका दाग मूल अन्तरक्रिया।
त्यहाँ व्यञ्जन परिवर्तन हुँदा मसालेदार अदुवा स्वाद neutralizes। उहाँले मुख मा कुनै aftertaste छोड्छ। जापानी को भूमि प्रयोग प्रक्रिया हो: रोल प्रत्येक प्रकार पछि तिनीहरूले मूल चपाउनु। यसरी मात्र अलग अनुमानित सकिन्छ पकाएको व्यञ्जन स्वाद।
किन आफ्नै अदुवा मसालेदार?
कारण सरल छ। एक उत्पादन वातावरण सधैं उच्च गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्दैन मा अदुवा को तयारी को लागि। यसबाहेक, उत्पादन प्रविधि लागि तयारी परिरक्षकों को वाहेक imperative छ कि यस्तो छ। अदुवा सहित कुनै पनि उत्पादन, को संरचना मा additives को एक किसिम, मानव स्वास्थ्य मात्र हानि ल्याउन।
अदुवा कसरी अचार गर्न?
सबै को पहिलो, तपाईंले ताजगी मूल सुगन्ध र पकाएको खाना को स्वाद निर्भर भनेर थाहा हुनुपर्छ। नुनीन बनान लागि मूल चयन गर्दा परिपक्वता को डिग्री ध्यान आवश्यक छ। अदरक क्रप हालको वर्षमा फसल छ भने, मूल "जल" भनिन्छ, र यदि विगतमा - "। बेनी देखा" तपाईंले पहिले नै किन मसालेदार अदुवा गुलाबी रंग थाहा छ। फोटो तलको जवान र पुरानो जरा को उपस्थिति देखाउँछ।
के मसालेदार गरिनेछ अदुवा मा, यो गुलाबी वा उत्पादन गर्न प्रयोग रंग भर पर्छ। निम्नानुसार marinating प्रविधि:
अदुवा को दुई सय र पचास ग्राम लिनुहोस्। मूल संग बोक्रा बेकारी।
त्यो त पातलो स्लाइस मा कटौती। तपाईं peeler प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले छिटो प्राप्त गर्नुहोस्, र टुक्रा वर्दी मोटाइ को हुनेछ।
पानी ग्लास सबै एक फोडा ल्याइएको, नुन को एक चम्मच थपिएको छ।
अदुवा shavings पानी discharged छ जो पछि यो समाधान संग पाँच मिनेट पोखे।
फेरि चीनी को एक चमचा संग पानीको ग्लास उसिनेर।
अदुवा सिरप यो खन्याइन् र शांत राखे।
त्यसपछि यो भने पुरानो मूल, सिरका र एक सानो devyatiprotsentnogo चुकंदर को एक चमचा थप्नुहोस्।
पकाएको पकवान यो तीन दिनको लागि सम्भव छ, एकै रातमा फ्रिज मा राखिएको छ। अदुवा तयार मसालेदार।
आत्म-गरे वा स्टोर अदुवा मा खरिद केही समय भण्डारण गर्न सकिन्छ। यो गर्न, यो hermetically छाप र फ्रिज राख्नु पर्छ। एक जार देखि अदुवा लिएर जब, यो फेरि उही बाटो प्याक गर्न। प्रयोग मात्र ग्लास वा माटोको बर्तन भण्डारण गर्न। त्यसैले केही महिना लागि चिसो मा मसालेदार अदुवा खडा हुनेछ र deteriorate छैन।
मसालेदार अदुवा को लाभ
अदुवा - एक अद्वितीय बोट। अक्सर, यो यसको प्रयोगमा आउँदा, मान्छे किन अदुवा गुलाबी रंग मसालेदार सोध्छन्? यो लेखको सुरुमा यसको बारेमा पढ्नुहोस्।
निम्न मा मसालेदार अदुवा को लाभ:
यो मानव शरीर को टोन सुधार गर्छ।
यो शरीर चिसो सामना गर्न मदत antiviral प्रभाव छ।
पाचन सुधार गर्छ। यसलाई मसालेदार अदुवा सुशी संग सेवा भनेर जानिन्छ, र तिनीहरूले कच्चा माछा देखि तयार छन्। अदुवा डाइजेस्ट गर्न मद्दत गर्छ।
हृदय र रक्त नली मा सकारात्मक प्रभाव। यो म्याग्नेसियम र क्याल्सियम मा बिरूवा राख्न मद्दत गर्छ।
अदुवा नियमित प्रयोग संग रगत शुद्ध पार्छ।
को मौखिक गुहा Disinfects र अप्रिय गन्ध समाप्त।
क्यान्सर संग सम्बन्धित रोगहरु को रोकथाम लागि प्रयोग।
यसलाई यौन अङ्गहरूको प्रणाली मा एक लाभदायक प्रभाव छ।
यसले सम्पूर्ण जीव को कायाकल्प असर गर्छ।
महिला लागि अदुवा को लाभ
मसालेदार अदुवा गर्भवती प्राप्त आशा गुमाएका गर्ने महिला लिन सिफारिस गरिएको छ। मूल को संरचना मा उपयोगी पदार्थ ovulation, को normalization चक्र मा एक लाभदायक प्रभाव छ। यो महिला सफलतापूर्वक बच्चा गोदभराई मौका दिन्छ। साथै, अदुवा, मसालेदार सहित भडकाऊ प्रक्रिया को रोकथाम र उपचारका लागि संकेत छ।
मानिसहरू लागि अदुवा को लाभ
ताजा र मसालेदार अदुवा उचित स्तर मा पुरुष शक्ति कायम राख्न मद्दत गर्छ। मूल तरकारी मानिसहरू मा potency पत्र मात्र छैन, तर पनि यसलाई सुधार गर्न एक अद्वितीय क्षमता छ। अदुवा को सक्रिय जीवन मानिसहरू खर्च शक्ति ठीक लग्नु गर्नुपर्छ।
तेल। उत्पादन विवरण
एक धुनमा कसरी बांधन गर्न? सुझाव गृहिणी र शिकारी
क्यान्ड मटर: लाभ र हानि। हरियो मटर को उपयोगी गुणहरू
लसुन र मेयोनेज संग क्यालोरी चुकंदर। सलाद नुस्खा
आवेग फल - यो फल हो? उपयोगी गुण र व्यञ्जनहरु
विदेशी फल - feijoa कसरी खान
युवा कम्पनीहरु लागि क्रिसमस खेल
ट्यांक को विश्व मा दर्ता कसरी निर्देशन
घरमा महिला घनिष्ठ haircuts को प्रकार। महिला घनिष्ठ सैलुन को विकास
"पाँच तिब्बती मोती" - युवा, सौन्दर्य र स्वास्थ्य को लागि सरल व्यायाम
गहुँ porridge। लाभ र हानि। उनको बारेमा सबै
लैरी राजा: जीवनी, साक्षात्कार, संचार को नियम। लैरी राजा र आफ्नो पुस्तक लाखौं जीवनमा परिवर्तन गर्ने
"Angioflyuks": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, वर्णन, analogs
Meril पट्टी संग सिनेमा: विधा, भूमिका, समीक्षा गरेर चलचित्र को सूची
अस्पताल "सिल्भरस्प्रिङ": मास्को मा मनोरञ्जन र आराम
Quince: लाभ र हानि। को जाडो लागि जाम
भविष्यवाणीहरूसँग कुकीहरू। शुरुवातका लागि नुस्खा।